Wamkelekile eMonihar - indawo yokuhlala eluhlaza - I-Airbnb
Wamkelekile eMonihar - indawo yokuhlala eluhlaza
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMonika
Le ndlu ikwindawo ekhuselekileyo nethe cwaka eBarrackpore; malunga 25 imizuzu drive ukusuka Kolkata International Airport. Uyakuthanda ukuhlala kwigumbi labucala kumgangatho ophantsi kwesi sakhiwo sinemigangatho emibini. Igumbi lokuhlambela leen-suite likhona. Iindwendwe ezimbini ziya kulala kamnandi kumandlalo wenkosi. Usapho olunondwendwe lwakho luhlala phezulu kwaye lunokufumaneka ngalo naluphi na uncedo ukuba kwaye xa lufuneka.
Eli gumbi labucala liya kukhululeka kwiindwendwe ezimbini. Igumbi lokuhlala elisecaleni liyindawo eqhelekileyo kodwa ibanzi. I-Cable TV(LED) kunye nesofa enye ikhona kwigumbi lokuhlala apho undwendwe lwesithathu lunokuhlaliswa khona. Igumbi lakho labucala linegumbi lokuhlambela leen-suite elinegiza yamanzi ashushu. Sinegadi enophahla phezu kophahla. Le inokuba yindawo oyithandayo yokuchitha ixesha lasimahla.
Iinkonzo ezihlawulelwayo ezongezelelweyo:
1.Indawo yokupaka ehlawulwayo ecaleni komnyango.
2. Indawo yokutyela kunye nekhitshi enezinto eziluncedo ezisisiseko kuphela ezisetyenziselwa usetyenziso lweendwendwe (ubuncinci beentlawulo zesilinda serhasi ezisebenzayo) ecaleni kwegumbi lokuzoba.
I-3.AC isebenzisa kwigumbi lokulala ngesiseko sentlawulo yosuku.
Indawo yam, iBarrackpore, idume ngokwembali ngeendlela ezininzi. Eyona ndawo indala yaseIndiya ilapha. Umlambo iGanga uhamba malunga neekhilomitha ezi-3 ukusuka kwindawo yam yokuhlala. UMahatma Gandhi undwendwele le ndawo kunye nemyuziyam emva kwegama lakhe ibekwe kufutshane nendlela entle esecaleni lomlambo. Ipaki yeMangal Pandey yenye into enomtsalane kwesi sixeko sasedolophini. I-ICAR-CIFRI (Iziko loPhando lwezokuLoba kuMbindi we-Inland), i-Barrackpore, liziko eliphambili lophando lokuloba eIndiya naphesheya elimalunga neekhilomitha ezintandathu ukusuka kule ndlu.
Izixhobo ezikufutshane (ngaphakathi kwemizuzu emi-2 ukuya kwe-4):
#Iivenkile ezithengisayo, Ivenkile yamayeza, Iilekese namashwamshwam, Indawo yokuhlamba impahla, iSaloon, iBhanki yeSBI eneATM, Restaurent/Bar, Hulk Fitness Club
Udederhu lweevenkile, iHolo yeCinema, iSibhedlele esikumgama we-1.5 km, ukutya okwahlukeneyo kwi-intanethi kufumaneka ngezomata app.
Ndiza kuba sekhaya ukuze ndinamkele kwaye ndiphendule yonke imibuzo yakho kwaye ndingaboniswa kancinci. Ukuba ungaphezulu kohlobo lwabucala, ngokuqinisekileyo ndiya kukuhlonipha oko kwaye ndikushiye wedwa. Kodwa wamkelekile ukuba ube nexesha kunye nathi.
Ndiza kuba sekhaya ukuze ndinamkele kwaye ndiphendule yonke imibuzo yakho kwaye ndingaboniswa kancinci. Ukuba ungaphezulu kohlobo lwabucala, ngokuqinisekileyo ndiya kukuhlonipha ok…